बे’हुली ब’हि’नीको आ’फ्नै दा’इले ह’त्या गर्नुको रह’स्य यस्तो, सकुन्तलाको सा’त बर्षको प्रे’म स’म्बन्ध थियो ! हेर्नुहोस् (भिडियो सहित)…. – SUDUR MEDIA
December 26, 2020 AdminLeaveaComment on बे’हुली ब’हि’नीको आ’फ्नै दा’इले ह’त्या गर्नुको रह’स्य यस्तो, सकुन्तलाको सा’त बर्षको प्रे’म स’म्बन्ध थियो ! हेर्नुहोस् (भिडियो सहित)….
(भिडियो समाचारको अन्त्यमा छ) ताप्लेजुङ– प्रसिद्ध धार्मिकस्थल पाथीभर मन्दिर नजिकैको जंग’लमा भी’षण डढे’लो लागेको छ ।
फुङलिङ् नगरपालिका–११ मा पर्ने सिम्बु सामुदायिक वनमा तीन दिनदेखि ड’ढे’लो लागिरहेको स्थानीयले बताएका छन् ।स्थानीय राजेन्द्र महतले दिएको जानकारी अनुसार ड’ढे’लो निकै ठूलो भएकाले नि’यन्त्र’णमा लिन सक्ने अवस्था छैन ।
बिहीबार बेलुकादेखि नै आगो लाग्न थालेको पाइएको बताउँदै महतले स्थानीय शुक्रबार थाहा पाएर प्रहरीलाई खबर गरेको बताए । अहिले हा’वा पनि चल्न थालेकाले झन आ’गो फै’लिएको भन्दै स्थानीय त्र’सि’त भएका छन् । पाथीभरा मन्दिरदेखि ड’ढे’लो लागेको स्थल एक किलोमिटर तल पर्छ । आ’गो तत्काल नि’यन्त्र’णमा लिन नसके मन्दिरसम्मै पुग्ने सम्भावना छ ।
आ’गोले ठू’लो फेदी बस्तीमा ल्याएको खानेपानीको पाइप ड’ढेपछि पानी अ’वरु’द्ध भएको छ । ताप्लेजुङ सदरमुकाम फुङलिङबाट समेत उक्त स्थानमा धुवाँको मु’स्लोसहित आ’गो द’न्किरहेको देखिन्छ । यो रे’डपाण्डा पाइने क्षेत्र पनि हो। थप हेर्नुहोस् भिडियोमा: